Magnetic ukutshopa massager iso - idivayisi lapho sihamba ngokushesha ukukhathala, umbono ovamile. Nokho, njenganoma yiluphi izidakamizwa noma idivayisi, le divayisi has kokubili izinkomba kanye izixwayiso ukuze zisetshenziswe. Abakushoyo, indlela yokuqhuba lo massager yini odokotela Izibuyekezo ngakho, Ngisanda wafunda.
Ngaphambi izincomo iso ukusetshenziswa massager - ngokuqondile ukuthi ubani kuyinto efiselekayo usebenza khona kwalowo mshini wezokwelapha:
Abafundi kanye abafundi, abavame uhlushwa myopia zamanga elihlobene ne spasm kwemisipha iso.
Abantu abasebenzelana umthwalo omkhulu ezibukwayo. Lawa izigaba ukuzibonakalisa, ezifana PC opharetha, program, Accountants, nabaqambi nabanye.
Abahola impesheni Zingobani 'plus "amaphuzu.
Abantu (ikakhulukazi abesifazane), abanale imibimbi, izikhwama kanye tindilinga amnyama ngaphansi kwamehlo.
Labo babe ngezikhalo bekhanda noma ubuhlungu iso, ukuqwasha.
Kukhona izincomo ezithile abantu ekusetshenzisweni massager iso. Basuke waveza kanje:
Ukusebenzisa lisebenze izingane ezingaphansi kweminyaka 8 avunyelwe kuphela khona umuntu omdala.
Ngaphambi inqubo, imininingwane massage sicela uthathe ukhululekile isikhundla -polulozha.
Kungcono hhayi ukusebenzisa kudivayisi ngenkathi ushayela noma uhamba emgwaqweni.
Ngokushesha ngaphambi kokuba inqubo kudingekile ukususa lens contact.
Ubude kumele singeqi imizuzu engu-15.
Awukwazi ukusebenzisa idivayisi ngesikhathi sokulala.
Musa usebenze massager endlini yangasese noma ezinye izindawo nomswakama eliphezulu.
Sebenzisa lisebenze kumele kube ngokuqinile inhloso yazo.
Awukwazi ukuqaqa umshini.
Ngaphambi uthenga massager zamehlo, udinga ukuvakashela kudokotela wezifo zamehlo, ngoba idivayisi kukhona contraindication. Musa usebenze umshini kubantu abanomsebenzi izinkinga zezempilo ezilandelayo:
lamabutho kanye ngwengwzi iso igebe ;
khona i-lens yokufakelwa;
izifo ephelezelwa umkhuhlane;
umonakalo noma ukuvuvukala isikhumba ezizungeze amehlo;
khona izifo zezinzwa. Le nto engashiywa, uma umuntu uya ngokuxhumana kudokotela oyisazi sezinzwa ngezindleko, udokotela kanye umvumele ukuba usebenzise ucingo.
imicabango yabantu beauticians
Massager Eye izibuyekezo cosmetologists has omuhle kuphela. Ochwepheshe batusa kakhulu ukusetshenziswa kudivayisi ezinjalo abantu ngemva kweminyaka engu-30. Cosmetologists ukholelwa ukuthi lesi kuyoyixazulula inkinga yesikhumba ukuguga ngaphambi lalibukeka. Cream, ngokusho kongoti, akakwazi ukubhekana ngokwanele nezinguquko ezihlobene nokukhula, kodwa izinga ezinhle massager ukwenza umsebenzi walo - futhi abantu ngeke bheka omncane 5-10 kweminyaka. Nokho, odokotela baxwayisa ngokuthi kubalulekile ukuthenga kudivayisi ezibizayo. Kungcono ukuchitha imali kanye, kodwa ngaleso sikhathi kuyoba ukusindisa ngokusebenzisa ukuphila konke kudivayisi.
Ukuze lokho Magnetic ukutshopa massager iso lifanelwe ukuqashelwa enjalo cosmeticians? Odokotela bakholelwa ukuthi idivayisi akwazi ukwenza lokhu okulandelayo:
Buyisela ukugeleza lymph. Umzimba uqobo iqala ukuhoxisa amanzi angadingeki bese ngenxa yalokho, kususa puffiness, imibuthano phambi kwamehlo zinyamalale.
Ekhuthaza ukugeleza kwegazi endaweni iso. Amaseli kanjalo kancane kancane seziqala bazogcwalisa oksijini, izinto eziwusizo.
I-apharathasi uyakwazi okwenza isikhumba ezizungeze amehlo nezimo (ngenxa ukukhiqizwa ngcono collagen futhi mithambo ine-elastin). Futhi ngenkathi kungaba kuqedwe imibimbi.
imicabango yabantu bamehlo
I-acupuncture massager iso libuyekeza bamehlo wathola kokubili emihle nemibi. Nokho, izici ezingezinhle awahlobene ne isenzo umshini, futhi isimo sengqondo sabantu abaningi maqondana nesimo sempilo yabo kanye, ikakhulukazi, ukuba amehlo amehlo. Iqiniso liwukuthi e imiyalelo idivayisi ebhaliwe ngokucacile, hhayi akukho izifo ungasebenzisa kazibuthe massager iso. Phakathi izifo ezifana kukhona ukufiphala cataract, Izifo ukuvuvukala esweni. Futhi abantu walalela ukukhangisa futhi akhohlwe ukuthi ngaphambi kokuthi uthenge idivayisi enjalo, kufanele ubone udokotela, ekhemisi ukuthenga idivayisi futhi ulisebenzise. Bamehlo ukuxwayisa - ngaphambi kokwenza noma isiphi manipulation amehlo, kudingeka uvakashele udokotela wamehlo futhi uqiniseke ukuthi awunayo lezi zifo ukuthi kungaba ukwazi ukuvimbela ukusetshenziswa massager iso.
A yi omuhle bamehlo apharathasi ushilo ngempela. Uhlikihla endaweni iso asenze imisipha, ephumula kubo, upholisa, aqede ukukhathala, kuvusa umzimba, futhi konke kuthinta iqophelo umbono: kubangcono, libukhali, indoda ilahleke Ukugqamisa ihansi phambi kwamehlo akhe.
imicabango yabantu neurologists
Idivayisi ngokuthi "iso massager" Izibuyekezo wezinzwa lithole omuhle kuphela. Lezi ochwepheshe kusho izakhamuzi ngazwi linye bathi ukusetshenziswa idivayisi ezifana kungenzeka ngisho kudingekile. Ngoba ngemva kuseshini ubalekela ukuqwasha kubantu, ziba bejabule, futhi ababengalwamukelanga bakhalaza ikhanda, uyazikhohlwa ngazo.
Massager iso «Gezatone»: onobuhle ezithandwayo
Nokho, zikhona onobuhle eziningi zalezi amadivaysi, ethandwa kakhulu futhi ngempumelelo kukhona amathuluzi French ngokuqinile "Zhezaton". onobuhle adumile kulesi nomkhiqizi massagers - Gezatone Bem-1 no-3 Gezatone Bem.
Iinsetjenziswa "Zhezoton Boehm 1" kusiza ekudambiseni iso umthwalo emsebenzini nekhompyutha yami, uma ushayela imoto. Le divayisi uyakwazi Ukugcina nokulonda acuity ezibukwayo. Ngenxa umphumela massage apharathasi imibimbi ubuso bakhe esehlelembe iyanyamalala kancane kancane imibuthano, izikhwama ngaphansi kwamehlo. Lo mphumela kufinyelelwa ngenxa yemiphumela oqabulayo Amandla kazibuthe kanye vibration.
Iinsetjenziswa "Zhezoton Boehm 3" - inguqulo ethuthukisiwe ye tumbler kuya iso lokhu umakhi. Khombisa Umthelela zokwelapha kufinyelelwa ngenxa kazibuthe, vibration, futhi ezishisayo kokucindezelwa Amasimu.
Isici zedivayisi kuba phambi esikude, ngayo nefunda ngayo apharathasi zingalawulwa. Ngekusetjentiswa njalo lokhu model kuthuthukisa kwegazi, imisipha iso, amehlo ayisekho ubuhlungu. Iinsetjenziswa "Zhezoton Boehm 3" kuphumelela ngeso ukukhathala, ukwephulwa of acuity ezibukwayo (myopia, hyperopia), astigmatism, imibuthano izikhwama ngaphansi kwamehlo. Phakathi kwezinye izinto, idivayisi uyakwazi ukunqoba ukuqwasha.
Letindlela ezimbili massagers zamehlo - imiklamo entsha. Ngamunye wabo usebenza njengoba ibhethri futhi kunethiwekhi. amadivaysi izinga ezingeni eliphezulu kakhulu. Basuke eyenziwe ngepulasitiki okungenangozi babe izindlela eziningana ezisebenza, kwemibala ezahlukene.
Uma sicabangela massagers idume ngokudla kwamehlo inkampani "Zhezoton" intengo "Bem 1" imodeli kuzohluka phakathi ama-ruble ayizigidi 2-2.2, futhi iyunithi "Zhezoton Boehm 3." - ruble ecishe ibe yizinkulungwane 4 ..
Manje uyazi ukuthi kuyinto massager ngoba amehlo futhi yini isebenta ke wenza. Khumbula ukuthi, ngaphambi kokusisebenzisa kule yunithi, kubalulekile ukubona udokotela. Phela, naphezu kweqiniso lokuthi tumbler kunomphumela omuhle acuity ezibukwayo, isimo esingokomzwelo, ke ezingapheli zingayilimaza impilo yakhe.
Amaqhubu ezandleni - izimbangela kanye nokwelashwa